Arkaanta Iimaanka – Qaybta 3aad – Wajibad
Rumeenta kutubta Alle ku soo dejiyay rusushiisa (naxariis iyo nabad dushoda ha ahaatee) waa rukniga sadexaad ee arkaanta iimaanka.
Allena rusul ayuu ku soo diray aayada cad cad kutubna waa kusoo dejiyay, naxaris uu u naxariisanayo khalqiga hanuun owgeed, si ay u helaan libaan aduunyo iyo mid aakhiro, una ahaato jid ay ku socdaan, iyo si ow u noqdo mid u kala xakmiyo dadka waxa ay isku khilaafaan.
[سورة الحديد الآية ٢٥]
[Macnaha aayadana waa lasoo maray]
[سورة البقرة الآية ٢١٣]
“Dadka wexey ahaayeen umad kaliya allaana soo saaray nabiyo bishaareeyo digana, wuxuuna la soo dejiyay kitaabka xaq ahaan, si uu u kala xukmiyo dadka dhexdoda wexey isku khilaafaan.”
1: Xaqiiqada Rumeenta Kutubta
Rumenta ktubta waa: in aad si go’an u rumayso in Alle ow leeyahay kutub uu ku soo dejiyay rusushiisa, waana hadalkisi oo dhab ah, waana nuur iyo hanuun, waxey ka koobantahayna waa xaq iyo run iyo cadaalad waajib ah in laraaco laguna camalfalo, mana garanayo cadadkooda Alle moyaane ruux kale.
[سورة النساء الآية ١٦٤]
“Waxuu la hadlay Alle muuse la hadal.”
[سورة التوبة الآية ٦]
“Hadii ruux mushrikiinta ka tirsan uu ku megan galyo weydiisto, megan gelyeey si uu u maqlo hadalka Alle.”
2: Xukunka Rumeenta Kutubta
Waxaa waajib ah rumeenta dhamaan kutubta Alle rusushiisa ku soo dejiyay, Allena barakoobay oo sareeyee – asiga ayaa si dhab ah ugu hadlay, waana lasoo dejiyay ee lama abuurin, qofki inkirana asiga oo og ama inkira qaar ka mid ah waa gaaloobay.
[سورة النساء الآية ١٣٦]
“Kuwi rumeeyow rumeeya Alle iyo rasuulkisa iyo kitaabka uu ku soo dejiyay rasuulkiisa iyo kitaabki uu soo dejiyay ka hor, ruuxi ku gaaloobo Alle iyo malaaiktiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo maalinta aakhiro waa baadiyobay baadi fog.”
[سورة الأنعام الآية ١٥٥]
“Kani waa kitaab aan soo dejinay barakeysan ee raaca baqana waxaad mudantihiin in leydiin naxariisto.”
3: Baahida ay u qabaan dadka soo dejinta kutubta iyo xikmada ku jirta soo dejinteeda.
Koow: Si ow u noqdo kitaabka lagu soo dejiyay rasuulka kii ay u noqon leheed ummada si ay u ogaadaan diintooda.
Labo: Si uu u noqdo kitaabka lagu soo dejiyay rasuulka caadilka u kal xakumi umadiisa waxa ey isku khilaafaan.
Sadex: Si uu u noqdo kitaabka la soo dejiyay kan ilaaliyo diinta dhimashada nabiga ka dib meel walba iyo waqti walba sida uu xaalka dacwada nabigeena yahayba.
Affar: Si ay u noqoto kutubtaan xujadi Alle oo khalqigiisa kor ahaatay, ma khilaafi karaan mana kabixi karaan.
Macnaha aayada waa la soo maray.
4: Sida Loo Rumeynayo Kutubta
Rumenta kutubta waa mid si guud ahaana iyo mid faahfaahsan: tan guud waa: rumeenta in Alle kutub ku soo dejiyay rusushiisa (naxariis iyo nabad dushooda allaha yeelee).
Mida faahfaahsanna waa in aad rumeysid kutubta uu Alle ku magacaabay quraankisa, waxaana ka ogaanay kuwaas:
Suxuftii Ibrahiin iyo muuse
Iyo in aad rumeysid in ow Alle leeyahay kutub kale ow ku soo dejiyaya anbiyadiisa, mana yaqaano magacdooda iyo tiradoodaba Allihii soo dejiyay maahane ruux kale.
Kutubtaas oo dhanna waxaa loo soo dejiyay si ay u xaqiijiso u kali yeelida Alle cibaadada iyo camalka wanaagsan iyo in la reebo shirkiga iyo fasaadida dhulka, dacwada nabiyada asalkeedu waa hal kaliya haba isku khilaafaane shareecada iyo axkaanta.
Rumeenta kutubti hore waa qirdda in lagu soodejiyay rusushi hore, rumenta qraankuna waa qiridiisa iyo raacida waxa dhexdiisa ahaaday.
[سورة الأعراف الآية ٣]
Macnaha aayada waan soo sheegnay.
“Raaca waxa leydiinkaga soo dejiyay xaga rabigiin, hana raacinina sokadiis owliyo.”
Quraankuna wuxuu kaga duwanyahay kutubti hore waxyaabaha soo socdo:
Wuxuu mucjiso ku yahay eraygiisa iyo macnihiisa iyo waxa ku sugnaaday oo ku saabsan koonka iyo cilmiga.
Waa kii ugu danbeeyay kutubti lagasoo dejiyay samada, waxaana lagu khatimay kutubti sida loogu khatimay nabigeena nabiyada.
Alle ayaa kafaala qaaday ka ilaalintiisa in la leexiyo ama wax laga bedelo, taasna wuxuu uga duwanyahay kutubti hore oo leexid iyo bedelba ku dhacay.
Waa mid rumeeyay wixi ka horeeyay oo kutub ah, xaakimna dushooda ku ah iyo marqaati.
Waana mid nasakhay (tirtiray) kutubti ka horeysay oo dhan.
[سورة يوسف الآية ١١١]
“Ma eheyn sheeko been abuur ah laakiin waa rumen wixi ka horeeyay, iyo cadenta wax kasta, iyo hanuun iyo naxariis qoomki rumeeyay.”
5: Aqbalida Akhbaarta Kutubtii Hore
Waxaan ognahay si dhab ah in ay yihin wixi akhbaara oo ku yimid kutubti hore ahna waxyi Alle u waxyooday rusushiisa in ay yihiin xaq oo shaki ku jirin.
Arintaasna ma aha macnihiisu in aan aqbalno waxa ku yaal kutubta hada ahlu kitaabka haayaan, maxaa yeelay waa la leexiyay waana labedelay, baaqina kuma ahaanin siduu Alle kusoo dejiyay.
Waxaan ka ogaanay kutubti horana waxaa kamid ah waxa uu Alle noogu sheegay quraanka oo ah in ay nafu denbi nafkale qaadeyn, insaankuna malaha wax uu u camal falay maahane wax kale, camalkiisana waa la arki doonaa, kadibna waxaa loga abaal mari doonaa si buuxdo.
[سورة النجم الآية ٣٦-٤١]
“Miyaan looga waraminin wixii suxufti muuse ku yiilay, iyo kuwi ibraahim kii oofiyay, in aysan naïf danbi nafkale qadeyn, ruuxna wuxuusan camalfalin uusan leheyn, camalkiisana la arki doono, kadibna looga abaal marin doono si buuxda.”
[سورة الأعلى الآية ١٦-١٩]
“Iskaba dhaafe waxaad dooraneysaan noloshi sokeysay, aakhiro ayaana kher badan baaqina ah, arintaaasna wexey ku sugan tahay suxufti hore, suxufti ibraahin iyo muuse.”
Xukunka Wixi Axkaam Ahaay
oo Ku Soo Arooray Kutubti Hore
Waxa kusugan quraanka waxaa waajib ah in aan ku cibaadeysano kuna camal falno, kutubti horase waxa kusoo arooray waan eegeynaa hadey khilaafsan yihiin shareecadeena kuma camal faleyno, sababtuna ma ahan inuu baadil yahay, ee waxaa lagu bedelay shareecadeena, hadii uu waafaqo shareecadeenana waa xaq oo shareecadeena ayaa natusi inuu sax yahay.
6: Kutubta Samaawiga ah oo Ku Soo Aroortay Quraanka Iyo Sunnada Waa:
(1) Quraanka Kariimka ah
Waana hadalki Alle uu kusoo dejiyay Nabi Muxamed (naxariis Alle iyo nabad dushiisa ha ahaatee), khaatamkii (ugu danbeeyay) rususha iyo anbiyada, waana kii ugu danbeeyay kutubta lasoo dejiyay, ilaahey ayaana kafaala qaday ka ilaalintiisa bedelid iyo leexid, waxuuna kadhigay mid nasakho kutubti horo.
[سورة الحجر الآية ٩]
“Anaga ayaa soo dejinay dikriga (quraanka)
anaga ayaana ilaaliyayaal u ah.”
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
[سورة المائدة الآية ٤٨]
“Waxaan kuugu soo dejinay kitaabka xaq, rumeynayana wixi hortiisa ahaay oo kutub ah, ilaaliyana u ah, ku xakun dhexdooda waxa Alle kuu soo dejiyay.”
Waa kiaabki Alle kusoo dejiyay Nabi Muuse (dushiisa ha ahaato nabade), waxuuna kayeelay hanuun iyo nuur uu ku xakumayo anbiyada reer banii israaiil iyo culimadooda.
Towraatka waajibka ah in la rumeeyo waa kii Alle ku soo dejiyay nabi muuse, ee ma aha towraatka bedelan oy ahlu kitaabka manta heestaan.
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ
[سورة المائدة الآية ٤٤]
“Anaga ayaa towraat soo dejinay dhexdeedana waxaa ahaaday hanuun iyo nuur ey ku xakumayaan nabiyadi islaamay kuwa yahuudoobay, rabaaniyiinta (kuwa kulmiyay cilmi iyo cibaado badan ama culimada ku tarbiyaynayo cilmiga kiisa fudud ka hor kaiisa adag) iyo culimadooda (waxey ayagana ku xakumayaan) wixi la ilaashaday oo kitaabki Alle ka mid ah.”
Waa kitaabki Alle ku soo dejiyay Nabi Ciise (nabadi dushiisa ha ahaatee) si xaq ah rumeeynayana wixi kahorreyay oo kutub ah.
Injiilka waajibka ah in la rumeeyana waa kii Alle uu ku so dejiyay ciise asalkiisana sax yahay ee ma aha kan hadda yaal.
[سورة المائدة الآية ٤٦]
“Waxaan raacsiinay raadki ciise asigoo rumeynayo wixi labadiisa gacmood hor ahaaday oo towraat ah, waxaana siinay injiil oo dhexdiisa ah hanuun iyo nuur iyo rumen wixi kahoreeyay oo towrat ah iyo hanuun iyo waano u sugnaatay kuwa dhorsaday.”
Wax yaabaha ku yimid towraat iyo injiil waxa kamid ah ku bishhrenta risaalada nabigeena Muxammad (naxariis Alle iyo nabadi dushisa ha ahatee).
“Kuwa raacaya rasuulka nabiga ah ee umigaa oo ey kahelayaan qoraalkiisa aktooda towraat dhexdeeda iyo injiil, wuxuu amrayaa wanaag wuxuuna ka reebayaa xumaan, waxuuna u baneynayaa wixi wanaagsan waxuuna ka xarrimayaa wixi xun waxuuna kadhigayaa culeskii iyo xarigyadii dushooda ahaa.”
Waa kitaabki uu Alle ku soo dejiyay Nabi Dawuud (dushiisa ha ahato nabade), zabuurka waajibka ah in la rumeeyana wa kan ilaahey ku soo dejiyay dawuud ee ma aha waxa ey yahuuda bedeshay.
[سورة النساء الآية ١٦٣]
“Waxaan siinay dawuud zabuur.”
5: Suxufti Ibraahiin iyo (6) Muuse
Waana suxufti uu Ilaahey siiyay Ibraahiim iyo Muuse, suxuftaana lama haayo waxna lagama yaqaano waxa quraanka iyo sunnada noo sheegeen maahane.
Macnaha aayada wala soo dhaafay.
[سورة الأعلى الآية ١٤-١٥]
“Xaqiiqee waxaa liibaanay qofkii daahir noqda xusana rabigiis dukadana.”
Fadlan la soco qaybta xigta waxa aynu ku soo qaadan doonaa Rukniga 4aad oo ku saabsan Rumeynta (Rususha) Alle (swt) soo diray.
Arkaanta Iimaanka, Qoraal Af-Somali